पदलोलुप र नैतिकहराम बाहिरिँदा एमालेमा शुद्धीकरण भएको छः कर्ण थापा « Sagarmatha Daily News
पदलोलुप र नैतिकहराम बाहिरिँदा एमालेमा शुद्धीकरण भएको छः कर्ण थापा
काठमाडौं, भदौ १६ । नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापाले पद, पैसा, सत्ता, शक्ति र मन्त्रीका लागि जे पनि गर्ने पदलोलुप र नैतिकहराम मानिसहरुले पार्टी छाडेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको बहिर्गमनबाट एमालेमा शुद्धीकरण हुने उनको दाबी छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता थापाले भने, “अहिले बाहिरबाट हेर्नेलाई नयाँ होला, हामीलाई केही नयाँ लागेको छैन । दुई वर्षदेखि एमालेविरोधी कित्तामा लागेका व्यक्तिले अहिले पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका मात्र हुन् । त्यसले हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । यो पद, पैसा, सत्ता, शक्ति र मन्त्रीका लागि जे पनि गर्ने मूल्यहीन राजनीतिको परिणाम हो । अब एमालेमा शुद्धीकरण हुन्छ, त्यसैले चिन्तित छैनौं ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा १३ जना सांसद वडाध्यक्षमा पनि नसुहाउने मानिस भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, “हिजो असल र योगदान भएका मानिसलाई पन्छाएर गुटगत आधारमा त्यस्तै मानिसलाई टिकट दिइएको थियो । तिनीहरु अर्को पार्टीम जान्छन् भन्ने पहिले नै थाहा थियो । अब सरकारमा जाऊन्, मन्त्री खाऊ्न्, जनताका अगाडि अझ प्रस्ट हुन्छ । नामकरण नभएको र कन्तबिजोग हुने पार्टीमा लागेका छन् । बीउ नै गलत रोपेपछि हुने यही हो ।”
बाग्मती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री गुमे पनि एमालेलाई फरक नपर्ने उनले दाबी गरे । उनले थपे, “हिजो महान् त्यागी अष्टलक्ष्मी भन्ने माधव नेपाल होइनन् ? उहाँलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइँदा किन समर्थन गर्न नसक्ने ? निर्वाचनमा पराजय भएका भीम आचार्यलाई बनाउनै दिएनन् भन्ने उहाँ होइन ? त्यसले हामीलाई केही पनि फरक पर्दैन । हाम्रो विरुद्ध सबै प्रतिक्रियावादी शक्ति एकजुट भएर लागेका छन् । जगमा जनता एउटा पक्षमा छन्, टुप्पोमा अर्कै भइरहेको छ । अब फागुनमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ । १६ महिनापछि प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुन्छ । त्यसैले प्रतिक्रियावादीहरुले एमालेको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।” एमालेको सम्पत्तिमा माधव नेपालले दाबी गर्ने हो भने बचेखुचेको इज्जत पनि गुम्ने उनले बताए ।